China Elastomer TPS vhiri jekiseni kuumbwa Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Elastomer TPS vhiri jekiseni kuumbwa
TPS vhiri mhando isina ruzha vhiri. Jekiseni Kuumbwa kweTPS elastomer vhiri inomiririra.
Seye thermoplastic elastomer, TPS uye PU mavhiri ane yakanakisa tensile simba, yakakwira pamusoro pekupokana coefficient, yakanaka yakaderera tembiricha kuita, kugona kwemagetsi mashandiro, hapana kutenderera ruzha uye adsorption vibration, nezvimwe. zvitoro zvekutengesa uye trolley yendege.
Mestech inogona kupa hukuru hwakasiyana uye mhando dzePSP uye PU zvigadzirwa zveanokanda uye imwechete vhiri kuumbwa uye jekiseni kuumbwa.
Elastomer TPS vhiri
Muforoma uye Kuumbwa maitiro eTPS vhiri
1. Kune mitsara yemwaranzi yakakomberedza vhiri, saka kumanikidzwa kupwanya kunogamuchirwa.
2. Kune masaizi ekupararira kwemwaranzi akakomberedza vhiri, saka shanduko yeArc inofanira kushandiswa pakati penzvimbo dziri padyo.
3. TPU / TPS zvinhu zvine zvakanaka fluidity zvinowanzoitika kune batch mabheji mune jekiseni kuumbwa, saka maumburu cores anofanirwa kuve akakodzera.
4. Vhiri rakanyanya kukora kupfuura zvakajairwa uye rinoda bhidha simba jekiseni muchina, uye iyo jekiseni nguva ichave yakareba.
Jekiseni muforoma kuti TPS vhiri
Matipi eTPS vhiri dhizaini
Kuti kuwedzere kukakavadzana kunamatira uye zvirinani kutora kutetemera pamusoro pevhiri, maburi mazhinji uye maburi ane radial arrays akavakirwa pane hub hubis akagadzirwa padenderedzwa revhiri repurasitiki. Kana zvakajairika kufa dhizaini ikateverwa, chimiro cheforoma chichava chakaomarara kana chakaoma kuwana, uye chigadzirwa chichava chakaoma kubvisa. Vanhu vauya nenzira: kushandisa elastic mapurasitiki TPS uye PU semabhachi ejasi, uye kudziisa pane hub yakagadzirwa nezvinhu zvakaomarara.
Elastomer TPS ine zvakanakira yakakwira kukweshesana coefficient, yakanaka yekupfeka nemishonga uye yakanaka yekugadzirisa mashandiro, yakanaka kukweshera kunamatira uye vibration kutora, uye yakanaka kuomarara uye simba zvichienderana neyakaoma epakati hub. Panguva imwecheteyo, iyo yakasununguka deformation hunhu hweTPS uye PU elastomers anoshandiswa kumanikidza kuburitsa mufa mhango, nekudaro dzivisa kugadzira akawanda akaomarara anotsvedza mashini muforoma.
Kambani yedu iri muGuangdong, China. Nemaitiro einjiniya akanaka nemidziyo, isu tinopa iwo epurasitiki vhiri dhizaini uye kugadzirwa kweako kugadzirwa, uye tinoona kuti mhando yezvigadzirwa inoramba iri padanho repamusoro.
Pashure: Dzimba dzePurasitiki dzemagetsi inverter
Zvadaro: Plastiki yakadhinda kabutiro kavha
Transparent epurasitiki Kuumbwa
Kudhinda kwemvura kudhinda zvigadzirwa zvepurasitiki
Zvinhu zvepurasitiki mumikova yemotokari
Plastic electroplating uye vacuum yakanamirwa pamifananidzo
Mota mwenje jekiseni jekiseni kuumbwa